Filtrer les éléments par date : samedi, 02 mai 2020
samedi, 02 mai 2020 21:31
Monja Roindefo: « Mijoro hatrany ny tenako, hiaro ny vahoaka Malagasy sy handamina ny firenena »
Nanao fanambarana ny filoha nasionalin’ny antoko Monima sady Praiminisitra teo aloha manoloana ny tranga niseho tany Ambovombe Androy ny alarobia 29 Aprily 2020 teo. « Mijoro hatrany ny tenako, hiaro ny vahoaka malagasy sy handamina ny firenena », hoy izy.
« Miharihary fa mila fanovana ny fitantanana ny raharahan’ny firenentsika aty ifotony ka hatrany an-tampony », hoy hatrany i Monja Roindefo.
samedi, 02 mai 2020 20:50
Roland Ratsiraka: Mangataka ny hiverenana malalaka amin’ny asa
Nanao fanambarana tamin’ny tambazotran-tserasera sosialy facebook i Roland Ratsiraka androany, mangataka amin’ny fanjakana mba tsy hisy intsony ny sakana madinidinika hiverenana malalaka amin’ny asa manomboka amin'ny alatsinainy 4 mey 2020.
Tsy vao izao fa efa nisy hatrany ny valanaretina nitranga teto Madagasikara fa tsy notapahana ny asa fihariana ara-toekarena tamin’izany, hoy ity solombavambahoaka MTS voafidy teto Toamasina I ity, ka aleo hisokatra ny RN2, RN5 ary ny sidina anatiny fa mbola miandry kosa ny sidina iraisam-pirenena.
samedi, 02 mai 2020 19:05
Mpikarakara sy mpandray lanonana: Miray feo, mangataka ny hanokafana ny asan’izy ireo
Nanao fanambarana androany ireo mpikarakara lanonana, mpandray lanonana, mpanao sakafo mariazy sy mpikarakara fety, artista sy mpaka sary, ireo rehetra voakasiky ny « domaine événementiel », mangataka amin’ny fanjakana hanokafana ny asan’izy ireo.
Mahatsiaro ho voadona mafy manoloana ny valanaretina Covid-19 izy ireo, ka mangataka ny tsy hanasaziana amin’ny hetra tsy voaloa. Fangatahan'izy ireo ihany koa ny hanomezana alalana malalaka azy ireo hampakatra vidin’entana ary koa ny hahazoana mindram-bola amin’ny fanjakana hamelomana indray ny orinasa, ary tsy misy ny zanabola amin’ny fotoana ahafahan’izy ireo mamerina izany.
samedi, 02 mai 2020 18:53
Nosy Maorisy: Hiverina tsikelikely amin'ny asa manomboka amin’ny 15 mey
Nitarina hatramin’ny 1 jona 2020 ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina. Hiverina tsikelikely amin'ny asa manomboka amin’ny 15 mey. Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondrana atsy amin’ny nosy Maorisy nampahafantarina androany io.
Tsy nahitana tranga vaovao Coronavirus atsy Maorisy tao anatin’ny 24ora farany. 5 sisa ireo olona mbola manaraka fitsaboana. 314 no efa sitrana tamin’ireo 332 voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19. Miisa 17 656 vita fitiliana tatsy amin’ity nosy rahavavy ity hatreto.
samedi, 02 mai 2020 18:42
Mgr Randriamamonjy Marcelin: Sitrana tamin’ny aretina Covid-19 nahazo azy
Eveka Katôlika misahana ny Diosezin'i Fenoarivo Atsinanana i Mgr Randriamamonjy Marcelin. Isan’ireo mpandeha tonga avy any ivelany ny tapaky ny volana marsa 2020 izy, ary voamarina fa nitondra ny tsimokaretina Covid-19 tamin’ny fitiliana natao azy tao anatin’ny fitokanam-ponenana.
Sitrana soa amantsara i Mgr Randriamamonjy Marcelin ankehitriny, ary nijoro vavolombelona ihany koa fa nisotro ny Tambavy CVO tamin’ny nitsaboana azy.
Navoitran’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, teny amin’ny BANI Ivato ny zoma 1 mey 2020, nandritra ny fanolorana ireo Tambavy CVO fanomezana ho an’ireo firenena miisa 15 mpikambana eo anivon’ny CEDEAO fa nisy mpanakanto iray sy Eveka iray sitrana tamin’ny aretina Covid-19 ary nisotro ny tambavy CVO izy ireo tamin’ny fotoana nitsaboana azy ireo.
samedi, 02 mai 2020 18:35
Aorian'ny Coronavirus: Miova izao tontolo izao
Fahadisoana tanteraka ny fieritreretana fa niafina tao an-trano fotsiny, confinement, niandry ny nandalovan'ny Covid-19, toy niandry rivodoza na cyclone nandalo, ka rehefa nitsahatra ny orana sy ny rivotra, dia niverina nivoaka, nanamboatra izay simba sy nanadio tanàna dia miverina toy ny teo aloha ny fiainana.
Na mety azo atao hoe vitsy ihany ny maty maneran-tany mihoatra ny ady lehibe, ny hanohanana, ny pesta, ny Ebola, ny Palu, ny Sida... dia nampiova tanteraka an'izao tontolo izao iny Coronavirus iny.
Nanararoatra an'iny avokoa ny firenen-dehibe nanovany ny fizotran'ny toe-kareny, samy nanondraka vola amina miliara avokoa izy ireo ny orinasan'izy ireo, ny sehatra stratejika rehetra. Samy niverina nijery ny sehatry ny fahasalamany avy, ny fitaterana, ny famokarana, ny fambolena, ny teknolojia, ny fampianarana, ny fiarovana.